Inqubomgomo Yemfihlo -. DongGuang BEC Technology CO, LTD
Yiluphi ulwazi siqoqa?
Siqoqa ulwazi kusuka kuwe uma i-oda noma ugcwalise ifomu.
Lapho wayala noma kokubhalisa kusayithi lethu, njengoba kufaneleka, ungase ucelwe ukuba ufake igama lakho: igama, ikheli le-imeyili, ikheli lokuposa noma inombolo yocingo. Ungase, Nokho, vakashela ngokungaziwa indawo yethu.
Yini sisebenzise ulwazi lwakho?
Yiluphi ulwazi esiluqoqa kusuka kungenzeka ukuthi lisetshenziswe enye yezindlela ezilandelayo:
Ukuze ngumuzwa wakho
(Imininingwane yakho kusisiza ukuthi baphendule kangcono izidingo zakho ngabanye)
Ulwazi lakho, kungakhathaliseki ukuthi ngeke lithengiswe wahulumende nobe wangasese, benana, kudluliswe noma inikezwe iyiphi enye inkampani nganoma yisiphi isizathu leze, ngaphandle kwemvume yakho, ngaphandle ngenjongo express lokukhulula umkhiqizo uthenge noma isevisi eceliwe.
Sazi kanjani ukuvikela ulwazi lwakho?
Sisebenzisa ezihlukahlukene izinyathelo zokuvikeleka silondoloze ukuphepha kolwazi lwakho siqu lapho Ubeka umyalelo noma faka, ukuhambisa, noma kwimininingwane yakho.
Sinikeza ukusetshenziswa iseva evikelekile. Zonke enikeziwe ulwazi olubucayi / credit idluliselwa nge Socket Layer ubuchwepheshe (SSL) bese ngekhodi ku Inkokhelo lomasango abahlinzeki bethu egciniwe kuphela kuzinhlelo yilabo egunyaziwe nge ukufinyelela okukhethekile amalungelo izinhlelo ezinjalo, futhi kufanele agcine imininingwane yakho eyimfihlo.
Ngemva kuthengiselana, nolwazi lwakho luyimfihlo (credit card, izinombolo zikamazisi, ezezimali, njll) ngeke egcinwe kwi-server yethu.
Yebo (Amakhukhi files amancane ukuthi isayithi noma isevisi yayo umhlinzeki Ukudluliselwa kumakhompyutha yakho kanzima ngemoto yakho isiphequluli seWebhu (uma uvumela) eyenza amasayithi noma abahlinzeki besevisi izinhlelo ukuba uqaphele isiphequluli sakho futhi bamba futhi ukukhumbula ulwazi oluthile
Sisebenzisa amakhukhi ukuhlanganisa idatha ehlanganiswe mayelana site traffic futhi indawo ukuxhumana ukuze sikwazi ukunikela nakho indawo engcono kanye namathuluzi esikhathini esizayo. Singase ungenwa nge service third-party abahlinzeki ukusiza ukuba siqonde kangcono indawo yethu izivakashi. Lezi abanikezeli besevisi abavunyelwe ukusebenzisa ulwazi oluqoqwe egameni lethu ngaphandle ukuze kusisize siqhube futhi sithuthukise ibhizinisi lethu.
Inga-kghani siyazipha udalule nanoma yiluphi ulwazi ukuze amaqembu ngaphandle?
Asazi ukuthengisa, ukuthengisela, noma ngenye indlela ukudlulisela amaqembu ngaphandle ulwazi lwakho lomuntu siqu olubonakalayo. Lokhu akuhlanganisi omethembayo besithathu ngubani Ukusisiza ezisebenza website yethu, beqhuba ibhizinisi lethu, noma izinsizakalo kuwe, inqobo nje uma lawo malungu livume ukugcina lokhu imininingwane yakho eyimfihlo. Singase futhi akhulule imininingwane yakho uma sikholwa ukukhululwa kuyafaneleka ukuba athobele umthetho, ukuphoqelela indawo yethu, noma ukuvikela neyethu noma abanye kwamalungelo, impahla noma ukuphepha. Nokho, ulwazi isivakashi okungewona okhonjwa enikeziwe kwamanye amaqembu for ukumaketha, ukukhangisa, noma ezinye izinto.
Childrens Online Inqubomgomo Protection Act Ukuhambisana
Singabantu kuhambisana nezidingo COPPA (Childrens Online Inqubomgomo Protection Act), singazi ukuqoqa noma yiluphi ulwazi kusuka kunoma ubani ongaphansi kweminyaka engu-13 ubudala. IWebsite yethu, imikhiqizo kanye namasevisi wonke aqondiswe kubantu abaneminyaka engu-13 okungenani ubudala noma ngaphezulu.
Le nqubomgomo ubumfihlo ku-intanethi kusebenza kuphela ulwazi oluqoqwe ngokusebenzisa iwebsite yethu hhayi ulwazi oluqoqwe ku-intanethi.
Ngokusebenzisa indawo yethu, uyayamukela inqubomgomo yethu yobumfihlo Iwebhusayithi.
Izinguquko Inqubomgomo yethu yemfihlo
Uma sinqume ukushintsha inqubomgomo yethu yobumfihlo, sizothumela labo izinguquko kuleli khasi, kanye / noma ubuyekeze Inqubomgomo Yemfihlo ukuguqulwa usuku ngezansi.
Uma kukhona imibuzo mayelana ngale nqubomgomo yemfihlo ungaxhumana nathi.
Le nqubomgomo lusekelwa ngamandla Dongguan BEC Technology Co., Ltd .